Ihe kpatara ị ga-eji mara onye mmegide gị iji nweta ihe ịga nke ọma na Poker - jluis37.com
Otutu n’ime anyi maara okwu ochie a: mee ka ndi enyi gi buru ndi enyi na ndi iro gi nso. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi obere ndụmọdụ na-adịghị mma, ọ bụ igodo iji nwee ihe ịga nke ọma n’egwuregwu ọ bụla nke usoro – ọkachasị Poker. Ndị na-egwu egwu dịka Daniel Negreanu, Jason Koon, na Fedor Holz niile nwere otu agwa dị ezigbo mkpa: ha mụtara nka nke “ịmara” ndị na-emegide ha.
Ma ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume maka otu onye n’ime anyị otu ụbọchị ejedebe Holz ma ọ bụ Koon ma ọ bụ Poker Poker na-esote, ịmụ otu esi eme ka ndị na-emegide gị ịgụ akwụkwọ abụghị ihe siri ike. Iji na-egwu gị kacha mma egwuregwu, ya mkpa iji imeghari gị style of play dabere na ụdị https://onlineroulette.net.nz/no-download/ Poker player ị na-agbalị iti.
Ndị a bụ ụfọdụ ụdị ndị ọkpụkpọ “ụdị” ndị a na-ahụkarị ka ị ga-ezute ka ị na-egwu egwuregwu gị.
Nke a na ụdị player bụ dịtụ mfe iti nyere dị nnọọ a bit nke iche echiche mkpebi siri ike na gị na tebụl. Ndị egwuregwu na-enweghị ọrụ kwenyere na ha ga-efunahụ ya, yabụ na ha anaghị ebuli nzọ ahụ. Ha na-enyocha ma na-enyocha kaadị ha ruo mgbe ebighi ebi yana ịnwa inyocha ihe ọ bụ ndị iro ha ka ọ dị. Ha adighi nma na ya.
Ndị na-agba ume na-ejikarị ndị egwuregwu Poker egwu. Enwere ike ịkọwa ha oge ụfọdụ dị ka ndị na-eme ihe ike. Ha ga na-ebulite nzọ ha mgbe niile ma na-enwekwa obi ụtọ ịme ngosipụta nke ibe ha na tebụl. Ha na-ebuso ndị na-emegide ha ihu site na ọnọdụ nke obi ike. Zọ kachasị mma iji tie onye ọkpụkpọ Poker siri ike bụ njikọta nke ịmara etu na mgbe ị ga – esi bulie ma gosipụta (ma ọ bụ ịgha ụgha!) Obi ike nke aka gị na ha
Onye na-eme ihe ike ike
Ndị TAG agaghị amalite egwuregwu ọ gwụla ma ha bụ 100% n’aka ha. Ha nwere ike were oge ha ma ọ bụrụ na ha bulie nzọ ahụ, mana ozugbo ha ga-aga, ha dị ezigbo mma n’ịrụ egwuregwu ha. Agbanyeghị na nwayọ nwayọ, ozugbo ekwenyesiri ike na egwuregwu na-amasị ha, ha ga-ebido ịkụ nzọ na gburugburu ọ bụla.
The Loose-eme ihe ike ike Player
Loose ndị na-eme ihe ike, ma ọ bụ LAGs, bụ ụyọkọ siri ike ịkọwapụta nke ọma. N’ihi nke a, n’etiti ndị ọzọ, ha bụ notoriously siri ike iti. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha ga – ebuli nzọ mgbe ha meriri mmeri (na ihu ọma ha). Ọ na-atọkwa ha ụtọ ịzụlite kaadị tụgharịa.
Ọzọkwa ihe bara uru iburu n’uche bụ na ha bụ nna ukwu na bluffing. Zọ kachasị mma iji gbagbuo LAG bụ ịmata ihe ị na-eme. Onye na-eme egwuregwu na-eme ihe ike na-adịkarị njọ, na-egosipụta aka ya. Nke a bụ n’ezie oge kachasị mma maka ịkụ azụ. Mgbe ahụ, aghụghọ bụ iji uru nke obi ike ha.